ကျောက်ဖြူမြို့ရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှ ကျွန်းဆွယ်လေး စွန်ပန်းချိုင် •🌴🏝 (Virgin Beach) – YANGON STYLE
လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အရသာကို ကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်အောင်ကို ခံစားလို့ရပါတယ်
ကျောက်ဖြူလို့ပြောလိုက်ရင်အားလုံးသိကြမှာပါနော် ☺️ ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်ပိုင်းက ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လှလှပပကြီးရှိနေတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့လေးက သဒ္ဓါ့ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေလေးပေါ့ .. ဒီတစ်ခေါက် ကျောက်ဖြူပြန်တော့ ကျောက်ဖြူမှာရှိတဲ့ လူသူအရောက်ပဲနည်းပီး အရိုင်းဆန်တဲ့ ကျွန်းတွေ၊ Virgin Beach တွေရှိတာကို သိပ်ပြချင်မိတယ်လေ 🥰 အဲ့တော့ လှေတစ်စီးနဲ့ မိသဒ္ဓါတစ်ယောက် စွန်ပန်းခြေ (စွန်ပန်းချိုင်)လို့ခေါ်တဲ့ Virgin Beach လေးကိုရောက်သွားခဲ့တယ် 🌴
နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တင် ထူးဆန်းနေကြမှာပါ။ ရခ်ိုင်လို အသံထွက်ရင်တော့ တစ်မျိူးရှိတာပေါ့နော်။ စွန်ပိုင်းချိုင်လို့ ရခိုင်လိုခေါ်ကြတယ် ❤️
စွန်ပန်းချိုင်ဆိုတာ ကျွန်းစုတစ်ခုပါ အဲ့ထဲမှာမှ ကျွန်းခွဲလေးတွေရှိနေပြီး တစ်ကျွန်းမှာ တစ်ရွာစီရှိပါတယ်။ လှေနဲ့ဆို အဲ့ကျွန်းလေးတွေက ၅ မိနစ်လောက်ပဲသွားရတာ။ တစ်ရွာနဲ့ တစ်ရွာလဲ လှမ်းမြင်နေရတယ်။ တောင်တန်းတွေနဲ့ ပင်လယ်တွေကြားက နေရာလေးတစ်ခုပေါ့ 🌴
အဲ့မှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ ရှည်လျားဖြူဖွေးပြီး လူလုံးဝမရှိတဲ့ သဲသောင်ပြင်တွေ၊ အုန်းတောတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ ကျောက်ဆောင်အတန်းလိုက်ကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်😍 တွေးကြည့်တာနဲ့တင် အတွေးထဲမှာ သန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ လေတွေက်ို ရှုရှိုက်မိနေပါပြီ 🤩
အခု သဒ္ဓါ့ပုံတွေကတော့ စွန်ပန်းချိုင်ရဲ့ သဲတန်းလို့ခေါ်တဲ့ နေရာမှာပေါ့နော်။ သူက ရွာထဲကနေ မိနစ် ၃၀ ကျော်လောက် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ရွာဆိုတာလဲ အိမ်ခြေ ၅၀ တောင်မရှိပါဘူး။ အုန်းပင်ပေါတော့ အုန်းသီးတွေကို ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်ပို့ပီး ရောင်းကြတယ်။
ကဲ ထားပါတော့ အဲ့ဒါနဲ့ မိနစ်၃၀ လောက် လမ်းလျှောက်ပြီးရင်တော့ ခြုံနွယ်တွေ ကာထားတဲ့နေရာကနေ ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုက်ို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ကနေထွက်လိုက်ရင် အို အမေးဇင်းးးးးးးပေါ့🤩🤩🤩🤩
😛😛 ကျောက်ဆောင်မှာပဲ ဂါဝန်ပါ လဲချလိုက်
ဟိုက် ရား ဒါတော့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေကြ post🤣
အရမ်းကိုလှတဲ့ သဲသောင်ပြင်အရှည်ကြီးရယ် လှိုင်းလုံးကြီးတွေရယ်က အဆင်သင့် ကြိုဆိုနေကြတယ် 😍
ပင်လယ်ပျော်တဲ့ မိသဒ္ဓါတို့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ရေထဲတန်းပြေးတာပေါ့ 😁 အဲ့အချိန် ချောင်းသာ ငွေဆောင် ဘာမှလာမပြောနဲ့ ဒိုးးး 🤣 ကမ်းခြေက်ို တစ်ယောက်ထဲ အပိုင်စီးထားရတဲ့ Feeling ကလေ 🤩
အကျီ်င်္ချွတ်ပြီး ပြေးနေရင်တောင် ကြည့်မယ့်လူမရှိဘူး 🤭😝 နေတော့အရမ်းပူတယ်နော် 😬
အိမ်ကလဲ မုန့်ပဲသရေစာ ထမင်းဟင်းတွေအပြည့်ထည့်လာတယ်လေ အဲ့နေ့ကတော့ ကိုယ့်အတွက် နိဗ္ဗာန်ပဲ။ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် သဲသောင်ပြင်တွေကလဲ မှန်တစ်ချပ်လိုပဲ လှလိုက်တာဆိုတာ 🌴 သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လိုက်နဲ့လာ Camping ⛺️ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်အမှတ်တရဖြစ်မှာသေချာတယ်။
အဲ့ကနေ တခြား အမည်မရှိတဲ့ ကျွန်းလှလှလေးတွေက်ိုလဲ စက်လှေနဲ့ သွားလ်ို့ရသေးတယ်။
ရေမြင်ရင် မနေနိုင်သော ချိမ
ပါးစပ်မပါဘူးလို့ပြောကြတယ် သဒ္ဓါတော့ မသွားရဲလိ်ု့ 😁
Virgin Beach — at Kuaukpyu.
ကမ်းခြေရှိရာ သဲတန်းကျေးရွာ လူလဲသိပ်မရှိဘူးရယ်
ရွာထဲလမ်းဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူး လေတိုက်ပီး အုန်းသီးကြွေကျမှာစိုးလိ်ု့🤧🤧
ဒါကအပြန် ရှေ့ကကျွန်းကလဲ ရွာပဲ
အလာနဲ့ အပြန် ရေကျချိန်နဲ့ ရေတက်ချိန်
Gate of heaven 😍
😎အပြန်အုန်းရေလေးဝင်သောက် တလုံး ၁၀ဝ
သဲသောင်တစ်လျှောက်ပျော်ပါး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ရှေ့ကိုုဆက်သွားရင် ကျောက်တန်းတွေအများကြီးက်ိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရေတက်လာရင်တော့ နဲနဲပဲသွားလို့ရတယ်။ ရေကျချိန်ဆို ကျောက်တန်းကြီးက ပင်လယ်ထဲကို ထိုးထွက်နေတာ အဆုံးထိသွားပြီး ဓာတ်ဖမ်းလို့ရသေး 😍 တစ်ခါတလေတော့လဲ မွန်းကြပ်မှုတွေကြားက ဒီလိုအေးချမ်း တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ အပန်းဖြေရတာလဲ လွတ်လပ်မှုတစ်ခုပဲ။ ကိ်ုယ်ဆို အကျီ်နောက်တစ်စုံပါ ကောက်လဲပြီး ရိုက်ပလိုက်တာ ဟိဟိ🤭
ကျောက်ဖြူကလူတွေလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စားမယ့်ဟာ ကိုယ့်ပါကိုယ်ထည့်လာမှရမယ်။ အုန်းရေကလွဲလို့ ဘာမှမရှိဘူး😬 ကိုယ်တွေကတော့ ရိက္ခာစုံနဲ့ ညနေမှ အိမ်ပြန်လာတော့တယ်။
စွန်ပန်းချိုင်ကျွန်းကို ဘယ်လိုသွားရလဲ ? 🏝
သဒ္ဓါကကျောက်ဖြူကသွားတာဆိုတော့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးကိုတော့ စက်လှေနဲ့ ၄၅ မိနစ်လောက်ဖြတ်ရတာပေါ့နော်။ ပင်လယ် အလည်ခေါင်မှာ စက်လှေလေးနဲ့ သွားရတဲ့ ခံစားချက်ကလဲ အသည်းတယားယားပေါ့။ စက်လှေတွေငှားပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လာကြတဲ့လူတွေလဲရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေတော့ တကူးတကကြီး လာဖို့မလွယ်တာတော့အမှန်ပါ။😢 ကျောက်ဖြူလာလည်ရင်တေ့ာ ကျွန်းတွေက်ို အဲ့လ်ိုသွားလို့ရပါတယ်။အန္တရယ်လဲ လုံးဝမရှိပါဘူး။ မြိတ်တို့ ကော့သောင်းတို့လို လှတဲ့ ကမ်းခြေတွေ ကျွန်းတွေဆိုတာ ရေတွက်လို့တောင်မရပါဘူး။ လူသူအရောက်အပေါက်နဲတဲ့ Virgin beach စစ်စစ်တွေ ရခိုင်မှာအများကြီးကျန်ပါသေးတယ် 😍
ပင်လယ်ကြိုက်တဲ့ သဒ္ဓါ့အတွက်ကတော့ ကျောက်ဖြူသူဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ ကျွန်းတွေ တစ်နေ့တစ်ကျွန်း သွားမလား? စက်လှေတွေလျှောက်စီးမလား ? ချက်ချင်းငါးဖမ်းပြီး ခုဆိုခု ကင်စားမလား ရပါတယ်နော်။ သဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေအပြည့်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့လေးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်❤️
ကျောက်ဖြူမြို့အကြောင်းလဲ Pageမှာတင်ပေးသွားမှာမလို့ စိတ်ဝင်စားရင် စောင့်ကြည့်ပေးကြပါနော် ☺️
အသေးစိတ်သိချင်ရင်လဲ chat boxမှာ အချိန်မရွေးလာမေးလို့ရပါတယ်ရှင့် 😘
Edited – ရခိုင်အသံထွက် စွန်ပိုင်းချိုင်ကို နားလည်ရလွယ်အောင် ရေးလျှင် စွန်ပန်းခြေဟု ရေးလို့ရသည်ဟု ဒေသခံများပြောခြင်းကြောင့် ဖတ်ရလွယ်စေရန် မြန်မာလို ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် 🙏🏻 အခြားမည်သည့်ဘာသာစကားအကြောင်းအရာကိုမျှ ထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိပါ။
#KyaukPhyu #VirginBeach #ကျောက်ဖြူ #ရခိုင်
#စွန်ပိုင်းချိုင် #TDTravelNotes #TDTravelholic